Kwabaningi abahambi, amagama athi "i-Afrika" nelithi "safari" abonakala ngokuqinile njengamazwibela asondelene kakhulu. Futhi ungakukhumbuli kanjani lokhu, uhlela uhambo oluya ogwini olusempumalanga yezwekazi lasendulo. Ake sizame ukuqonda izinkinga ze-safari eKenya .
Okokuqala, igama elithi "safari" lisho ngokuhunyushwa ngokuthi "isiSwahili" ngesi-Arabhu ngokuthi "uhambo". Akumelwe siphikisana, iminyaka eminingi abakholoni baseYurophu basebenzisa leli gama ngegama lokuzingela izilwane ezingenasidlangalaleni nezingavamile, kodwa ngekhulu lama-21 ubuqili bezinlimi kanye nomthetho wendawo kwaletha zonke izinto endaweni. Namuhla safari luhambo oluhle nge-savannah, lapho izilwane zasendle ezihlukahlukene zihlala khona.
IKenya neTanzania yizizwe ezimbili ezinamapaki amakhulu kazwelonke, yingakho iningi le-safari ligcinwe lapha. Njengoba ngomthetho noma yikuphi ukuzingela eKenya kuvinjelwe, ungakwazi ukubhuka uhambo lwe-safari futhi ujabulele umbukiso omuhle.
I-car safari iyi-classic safari e- Kenya , okuyinto iningi lama-tour-firms elizokunikeza lona. Kodwa izimoto zihlukile: i-SUV, i-minivan nabanye.
Imoto engaphandle komgwaqo ovulekile yinhlobo ethandwa kakhulu e-safari eKenya. Ngendlela, imishini enjalo ithuthukiswa ngokuqondile: i-jeeps ivulekile ngokugcwele noma ivuliwe ngokugcwele, ngokushaywa ophahleni. Ukukhethwa komshini kwenziwa yinkampani ngokucophelela, kuye ngokuthi yiziphi izilwane ezihlala lapho uya khona.
I-Minivans ekuklanyeni ilula, ifinyeleleka kakhulu, isetshenziselwa amaqembu amakhulu ngakho-ke engabizi kangako. Kukhona ukungalungi: ukushaywa ophahleni kuncane kakhulu, ngokuvamile kuvumela izivakashi ezingu-2-3, ngakho-ke kufanele ushintshe njalo. Iphuzu lesibili: uma uhlela ukuvakashela ukuziqhenya kwezingonyama ezinkulu eMasai Mara , khona-ke le moto ayihambisani nawe, ngeke nje idlule emgwaqeni onogwadule ngendlela efanele.
Ezinye izimoto, njengomthetho, uhlobo oluthile lwe-hybrid phakathi kwamakhamera nama-SUVs. Kulokuthutha, ungabamba iqhaza ekutheni uhambo olude olude lwe-safari e-Kenya kusukela ngesonto noma ngaphezulu. Kumele uqaphele ukuthi kwamanye amapaki avunyelwe ukusebenzisa imoto yemoto evamile. Kodwa lena yodwa okukhethwa kukho ukuhamba okuzimele eKenya. Ukuhamba kwakho kuyoba mfushane futhi kufushane, futhi ukuqondiswa kwelayisensi kulezi zimoto ngeke uhlale phansi: akekho ofuna ukunamathela e-savanna, lapho ungahlangana khona nesilwane.
I-Safari evela emoyeni iyinketho kulabo abesaba ukusondeza izidumbu ngisho nasemotweni evaliwe. Ukukhetha ukubuka i-savan ekubukeni kwamehlo akuyona into embi kakhulu, ikakhulukazi ngesikhathi sokufuduka kwezilwane ezinkulu, isibonelo, amahabhu nama-antelopes. Izindiza ezikhanyayo nezindiza ze-helicopter zisetshenziselwa umoya we-air safaris, kodwa inketho yokuthandana kakhulu ukushayela ebhalini lomoya oshisayo. Iqhuma ephansi kunezindiza, futhi ihamba kancane, evumela ukubukeka kahle kwezilwane nokwenza isithombe esihle. Ngandlela-thile, izindiza ezinamabhaloni ekuntambeni zithandwa kakhulu.
Ukuhamba kwamanzi eKenya - okukhethwa kukho emfuleni naselwandle cruises ukuhlola izilwane ezithile nezinyoni, kwenziwa ngezimoto. Olunye uhlobo lokuthuthwa kwamanzi lapha alukwenziwa, ngoba ezweni alikho imifula ejulile nejulile, njengamazwe angomakhelwane. Eminye amapaki eKenya unganikezwa izinketho ze-mini-safari ngemikhumbi kanye nezikebhe zokugwedla. Kodwa lezi zinhlobo ezimbi kakhulu zokuhamba ziyakwazi kuphela ukuqondiswa okuhlangenwe nakho okuningi: cishe zonke izingwenya zezwe zakhiwa yizingwenya noma amavubu ayingozi.
I-safari elula ngokuvamile uhambo lokuhamba oluhambisane nomqondisi noMasai ohlomile noma uRanger. Kodwa eKenya lolu hlobo lokujwayela kwemvelo lwenziwa kancane kakhulu, kuphela endaweni yokugcina "Gateway of Hell" nase-oasis yaseMzima, lapho kungekho khona izidakamizwa. Ngezinye izikhathi ukuhamba okunjalo unganikezwa ukuhlala ehhashi, ikamela noma ukuqasha ibhayisikili.
Uhambo lokuhamba ebusuku - ukuhamba e-savan ekufuneni izilwane zasebusuku. Umhlahlandlela "uhlomile" nge-lantern enkulu enamandla, efuna izilwane, ngakolunye uhlangothi umshini uphenduka, ukhanyisa izilwane ngezibani ezikhanyayo. Ukumangala kwabaningi, ngobusuku i-savanna iyaphila ngokusebenzayo phakathi nosuku.
I-option safari "ngaphandle kokuphuma egumbini" - enhlokodolobha yaseKenya Nairobi kukhona inguquko ejabulisayo yokuhamba nezilwane zabavakashi abavilaphayo, ngisho nangaphandle kokuhamba. Iqiniso liwukuthi ehhotela I-Giraffe Manor i-counter of isikhungo yi-giraffes, abathanda ukuhlola amafasitela futhi adle okumnandi kusuka etafuleni lakho. Isidingo sehhotela sikhulu kakhulu, futhi kukhona amakamelo ambalwa kakhulu, masinyane.
Izindleko ze-safari eKenya
Umbuzo wezindleko ze-safari e-Kenya, yiqiniso, isicoco, kodwa ngemuva kokukhethwa kwepaki nokuvakasha. Izindleko ngokwazo zihamba kusuka ku-$ 200-220 umuntu ngamunye ngosuku ngoba zihamba kalula zifika ku-$ 3,500-4,000 ngeviki nezindiza eziphakathi kwamapaki amazwe amabili noma amathathu. Ngokwesilinganiso, sincoma ukuthi sigxile ku-$ 400 umuntu ngamunye ngezinsuku ezingu-3-4 - lokhu kuyindlela ethandwa kakhulu.
Uma ufuna ukubhuka uhambo lwe-Safari eKenya ngencwadi yokukhuluma yaseRussia, kuzomele ukhokhe cishe u-$ 100-150 ngeqembu ngalinye. Ngenkampani yayo enobungane kulula ukuthola ukuvakasha kanye nomhlahlandlela kakade emhlabathini lapho ufika, njengomthetho, kuyoba yinto eshibhile.
Izindawo zokuhlala eNamibia
Ethiopia - izindawo zokubhuka
Madagascar - amabhishi
Isikhumulo sezindiza saseZanzibar
Amaholide eNingizimu Afrika
AmaMyuziyamu Kazwelonke KaKenya
Yini okufanele ukuyilethe e-Ethiopia?
I-Madagascar - I-Excursions
Abalandeli abakwazanga ukubona ukuthi uRussell Crowe ophahliwe
Okungekho ukukhokhelwa kokuhambisana
Gqoka for wedding
Iphepheni yezingane - indlela yokwenza kahle?
Ukuhluleka kwenhliziyo ezinja - izimpawu kanye nokwelapha
Uhlelo lokuzala umuntu
I-makeup elula ye-Halloween
Ukulungiswa kwamapulangwe we-nasolabial
I-melon ekhulayo ebamba lokushisa
Ithonya lezinto eziyingozi emntwaneni
Ukudla okudliwayo kwe-Fat - Imenyu yesonto
Mousse kusuka manga
Kunokuphatha ukwelashwa kwe-bronchitis ngesikhathi ukhulelwe?
Ukudlula ngokweqile kwe-Corvalolum
Ukuqeda nge-bark beetle
Isigqoko sezingubo zoboya obukhuni
Jamu kusuka ku-physalis
Isaladi nge-shrimps nezinti zezinkuni
Ukubheka ngezithelo ze-acids
Ingane ayilahlekelwa izinga lokushisa
U-Irina Sheik noBradley Cooper bashisa isithuthuthu ngemuva kokuxoxisana kwakhe ngokudabukisayo